TelePrompter: Telefoonkaaga Xirfadlahaaga Khadka Tooska ah | Martech Zone
TelePrompter: Telefoonkaaga Xirfadlahaaga ee khadka tooska ah
Sabtida, Diisambar 5, 2015 Sabtida, Diisambar 5, 2015 Douglas Karr
Inta badan ee aan hadlo, waxaan jecelahay inaan si dabiici ah u hadlo oo aan yeesho muuqaalo waawayn inta aan soo bandhigayo. Qaabkan, waxaan umuuqdaa mid dabiici ah waxaanan diirada saari karaa qaabilaada hadalka ee dhagaystayaasha halkii aan kaheli lahaa ereyada shaashada kujira. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waqtiyo - sida fiidiyowyada Youtube - oo aan waqti ku haysto oo aan u baahanahay inaan qoro qoraal.
Ku dhajinta ereyada dukumiinti oo ku soo koobaya cabbirka xarfaha si aad u arki karto waa hal dariiqo oo lagu been abuurto haysashada teleprompter. Dabcan, rogrogmada iyo haysashada booskaagu waa xanuun aad u daran. Dhowr sano ka hor, waxaan wadaagnay qalab Qalabka ProPrompter, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si toos ah u daawato kamaraddaada internetka inta aad wax duubeysid.
In kasta oo ProPrompter ay bixiso barnaamij teleprompter u gaar ah, haddana waxaa jira qaab kale oo hadda laga heli karo khadka tooska ah. Teleprompter waxay leedahay Software oo ah codsi adeeg oo khadka tooska ah ah halkaas oo aad ku shubi karto qoraalkaaga (ama qoraal dad badan), geliso nasashooyinka waqtiyada leh, iyo xitaa sawirro Waxaad kuwan oo dhan ku samayn kartaa bilaash, ama waxaad ku sii hayn kartaa qoraalladaada qayb ka mid ah rukunka.
TelePromptor wuxuu ku barayaa sida loola hadlo sida xirfadle, adoo adeegsanaya teknoolojiyad patent-suge ah oo lagu xoojiyay toban kun oo khudbad ah. Adoo adeegsanaya celceliska farsamada muddada codka, waxaad u dhawaaqi kartaa sida kuwa faa iidada u leh! Ku martigelisay daruuraha, TelePromptor waa a codsi xirfadle teleprompting ah leh nadiif nadiif ah, istiraatiijiyad adeegsade oo loola jeedo qof kasta oo u baahan inuu u akhriyo qoraalka kamarad.
Shaashadda wax ka beddelka ayaa is-sharraxaysa, oo bixisa awoodda lagu daro sawirro, sameecado ku hadla, iyo hagaajinta nasashada.
Shaashadda ciyaarta gudaheeda, waxaad marin ugu heleysaa qoraalkaaga iyo sidoo kale jadwalka guud. Dusha sare waa bar horumarka qoraalkaaga oo leh nasashooyin si cad loogu sharaxay B. Lambarada iyo midabada la xiriira waxaa loogu talagalay isku-dubbaridka ku hadlayaasha kala duwan. Kaliya soo gal qoraalkaaga, u dejiso waqtiyada nasashadaada neefsashada ama joogsiga, oo waad iska tagaysaa!
Maaddaama teleprompter uu yahay mid jawaab celin ah oo lagu ciyaaro bog furaha dhexdiisa, waxaa lagu ciyaari karaa qaab soo bandhigid buuxda oo qalab kasta ah - desktop, tablet ama mobile.
Isku day TelePrompter
Tags: Shirka Suuqgeynta Internetkateleprompter khadka tooska ahhadalka teleprompterhadalkateleprompterapp telephromptertelepromptingcodsiga teleprompting